ROM 5 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (ROM 5)
Nꞌihi na site nꞌokwukwe anyị, Kraịst akpọbatala anyị nꞌime amara nke Chineke, ebe anyị nọ ugbu a. Anyị nọ nꞌọṅụ nweekwa olileanya na Chineke ga-eme ka anyị keta oke nꞌebube ya.
A sịkwarị na anyị bụ ndị ezi omume ọ gaara abụ ihe siri ike mmadụ ịbịa nwụọ ọnwụ nꞌihi anyị. Ma eleghị anya, a ga-ahụkwa onye nwere ike nwụọ nꞌihi ezi mmadụ.
Ọ bụrụ na Chineke gụrụ anyị dị ka ndị ezi omume site nꞌọbara Jisọs wụsịrị, a ga-esitekwa na Kraịst zọpụta anyị site nꞌọnụ ma Chineke.
Dị ka o si dị, ọ bụ site nꞌaka otu nwoke ka mmehie si bata nꞌụwa. Ọ bụkwa mmehie ya wetara ọnwụ. Ugbu a ọnwụ erutela onye ọ bụla aka nꞌihi na mmadụ nile emehiela.
Ọ bụ nꞌezie na ndị mmadụ na-eme mmehie site nꞌoge Adam ruo mgbe Chineke nyere iwu, ma a dịghị agụ onye ọ bụla dị ka onye mmehie mgbe ahụ, nꞌihi na Chineke enyebeghị ha iwu ya, ma ọ bụ gwa ha ihe ọ chọrọ ka ha mee.
Ma e mere ka ọnwụ rute onye ọ bụla site nꞌoge Adam ruo nꞌoge Mosisi. Ma ha anwụghị nꞌihi mmehie nke aka ha, ebe ọ bụ na ọ bụghị ha onwe ha nupụrụ isi nꞌiwu ahụ Chineke nyere Adam. Adam nꞌonwe ya nọkwa ọnọdụ dị ka ihe ịma atụ nke na-egosi Onye ahụ nke gaje ịbịa.
Mmehie Adam buteere mmadụ nile ọmụma ikpe ọnwụ, ma Kraịst bịara wepụ ọtụtụ mmehie, site nꞌụzọ dị otu a wetara anyị onyinye Chineke, nke bụ ndụ na-ejubiga oke.
Dị ka ọtụtụ mmadụ si bụrụ ndị mmehie nꞌihi nnupụ isi Adam, ugbu a ọtụtụ mmadụ ga-abụkwa ndị ezi omume nꞌihi nrube isi nke Kraịst.